Wararkii ugu Dambeeyey Shirka Madasha oo Wali la Isku Mari La,yahay – Xeernews24
Wararkii ugu Dambeeyey Shirka Madasha oo Wali la Isku Mari La,yahay
Shirka Madasha wadatashiga oo ah kii ugu dambeeyay ee la qabto ayaa weli lagu heshiis la’ yahay iyadoo shirka mudadii hore loogu qorsheeyay haatan ay u muuqato in uu dhaafay.
Aqalka sare ee la qorsheynayay in lagu heshiiyo ayaa weli la isku mari la’ yahay iyadoo kala duwanaanshaha xagga fikirka ah ay ka dhex jirto madaxda maamul goboleedyada dalka.
Madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Koofurgalbeed ayaa dalbaday in laga soo celiyo labada xubnood ee dheeriga ah ee la siiyay maamulka Puntland,hase yeeshee Madaxweynaha Puntland Cabdweli Gaas ayaa ku adkeystay in aan laga celin karin xubnahaas.
Sidoo kale waxaa miiska madasha la soo saaray in 15 xubnood la siiyo gobolka Banaadir taasoo sidoo kale uu ka biyo diiday madaxweynaha Puntland.
Hase yeeshee qaar kamid ah xubnaha madasha ayaa ku taliyay in gebi ahaanba la baabi’iyo Aqalka Sare maadaama aan lagu heshiin karin.
Si kasta ha ahaatee waxaa weli socda dadaalo lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo qeybaha kala gedisan eek a qeybgalaya shirka inay meel dhexe isugu yimaadaan.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa go’aansaday in uu dib ugu laabto magaalada Kismaayo iyadoo wararka ay sheegayaan in uu doonayo in salaada ciida Carafo uu kala qeybgalo shacabka Kismaayo kadibna uu dib ugu soo laabanayo magaalada Muqdisho.
Shirka ayaa la filayaa in dib la isugu soo laabto maalinta Arbacada maadaama berri ay tahay Ciid Talaadadana uu dhacayo shirka madaxweynayaasha IGAD.
Si kasta ha ahaatee dib u dhaca shirkan ayaa waxaa uu saameyn ku yeelan karaa qorshihii hore ee ahaa in bishan ay dhacdo doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/09/shirka-madasha-2-280x175.jpg 175 280 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-09-11 19:23:152016-09-11 19:23:15Wararkii ugu Dambeeyey Shirka Madasha oo Wali la Isku Mari La,yahay
Ciid Mubaarak Taarikhday Hijriyadu Ku Bilaabantay